Jeremy Guan, maneja mukuru weHuaian ASN tekinoroji yezvokurapa CO., LTD yakapa akakodzera vatungamiriri veHuai'an District Technology Bureau vakauya kukambani yedu kuzoferefeta nekutsvagira hushamwari Musi waAugust 26. Vakuru vanokodzera veTekinoroji Bureau teerera ...
1.Kuomarara kwakanyanya uye kurema kurema: Iko kuomarara kwechipenga mushure mekurapa inguva kakapetwa ka20 kechinyakare plaster. Iyi ficha inovimbisa kutendeseka uye kusimba kugadziriswa mushure mekugadzirisa chaiko. Iyo yekugadzirisa zvinhu idiki uye huremu hwakareruka, zvakaenzana ne1 / 5 yehuremu ...
Mashandisiro ekushandisa Orthopedic Kukanda tepi
1. Gadzirisa chikamu chakakuvadzwa uye uchachiputira nekotoni padding; 2. Vhura bhegi rekurongedza tepi uye nyudza bhandeji mumvura tembiricha ye20 of ~ 25 ℃ kweanenge 4 ~ 8 masekondi; 3. kumanikidzwa kusvina kunze kwemvura, mupumburu mumwe unofanirwa kushandiswa kubvarura imwe roll t ...